Alutech– Tana 2000 Akorondrano : nahazo ny loka milina Bosch ny avy any Talata Volonondry | NewsMada
Alutech– Tana 2000 Akorondrano : nahazo ny loka milina Bosch ny avy any Talata Volonondry
Misy ihany ireo orinasa na tranombarotra miezaka mampiseho tolotra tsara ho an’ny mpanjifa. Anisan’ireny ny Alutech eo Akorondrano, mitondra ireo milina fampiasa an-trano, marika Bosch, azo antoka 100 % eto an-toerana. Hita ao avokoa ireo tolotra ho an’ny olon-tsotra sy orinasa.
Ny orinasa Alutech eto Madagasikara no mivarotra ireo milina sy fitaovana fampiasa ao an-tokantrano mitondra marika Bosch. Fitaovana vita any Alemaina, manana kalitao ambony, manaraka ny fenitra eo amin’ny tsena eoropeanina. Anisan’ny fitaovana hita ao ny vata fampangatsiahana, fanasan-damba, fatana sy izay rehetra ilaina ao an-dakozia. Azo antoka 100 % ny fahavitany avy any Alemaina. Mivarotra ireo fitaovana isan-karazany ireo ny Alutech eto an-toerana nanomboka ny volana aogositra 2015. Kendrena ny mpanjifa rehetra, olon-tsotra na ireo orinasa mampiasa ireny fitaovana ireny, toy ny hotely.
“Ny tsara tsy mba mora”. Misy ihany ireo olon-tsotra matihanina amin’ny asany mampiasa ireo milina mitondra marika Bosch ireo. Ataon’ny orinasa Alutech ny hisarihana ny mpanjifa ho fampahafantarana sy fampiroboroboana ny varotra ao aminy. Nisy ny lalao fisarihana loka ho an’izay tonga nividy ny faran’ny taona 2015.
Olona mivady, azo lazaina fa mampihodina orinasa madinika, avy any Talata Volonondry, niezaka nividy milina iray fanaovana mofo, mitondra marika Bosch. Nahazo ny loka tamin’izany fisarihana izany izy mivady ireo. Natolotra azy ireo omaly ny loka, fanaka iray lehibe fanao ao an-dakozia, tao amin’ny Alutech, Akorondrano. Mitentina dimy tapitrisa Ar ny vidin’izany fanaka izany. Ankoatra ny Bosch, hita ao amin’ny Alutech koa Viva sy Siemens.